SP-USB02 SOICARE USB inotonhorera mhute aromatherapy ultrasonic yakakosha mafuta mota diffuser, China SP-USB02 SOICARE USB inotonhorera mhute aromatherapy ultrasonic yakakosha mafuta mota diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
SP-USB02 SOICARE USB inotonhorera mhute aromatherapy ultrasonic yakakosha mafuta mota diffuser
SOICARE USB inotonhorera mhute aromatherapy ultrasonic yakakosha mafuta mota diffuser
Ruvara bhokisi + Polyfoam
· 2-in-1 CAR OIL DIFFUSER: Inofananidzwa nemamwe ma humidifiers emota, yedu USB mota oiri diffuser inogadzirwa neRota-nemishonga PP zvinhu izvo zvinogona kukubvumidza iwe kudonha mafuta akakosha akananga mune ino diffuser. Uye zvakare, ino ultrasonic humidifier ichaita kuti oiri inyungudike mumvura nekukurumidza zvakanyanya. Paunenge uchinakidzwa nemhute inotonhorera, iwe zvakare uchave uine yakanaka aromatherapy kutandara.
· DOUBLE SWITCH ZVIMWE ZVINOKOSHA: Shanduko mbiri dzakagadzirwa. Zviri nyore chaizvo kuti tambo ye USB inogona kuchengetwa pazasi peiyi aromatherapy diffuser. Zviri nyore kuti ichi chiparadzi chishande, kutanga kubata kuti utange mhute, chechipiri kudzima ruvara uye rwechitatu kubata kumira kushandisa.
· PORTABLE QUIET HUMIDIFIER: Ichi chidiki chinotakurika humidifier, unogona kuitakura nyore nyore uchienda chero kwaunoda. Iri izano rakanaka remota yekurara yekufambisa hofisi mucheche imba yekugezera. Uye ruzha runoshanda harupfuure 30db. Iwe hauzombonzwa kunetseka kana uchityaira wakarara kana kudzidza.
· 7-KORORI YEMAHARA NEMAZUVA ANOPENESA: 7 mwenje mwenje inoratidzira, iyi mota humidifier inoshandura zvishoma nezvishoma ruvara rwechiedza chekufema panguva yebasa, inogona kusarudzwa kudzimwa zvinoenderana nezvaunoda iwe. Haisi chete yakakosha mafuta diffuser, asiwo yakanaka sarudzo yekushongedza yako yekurara mota uye hofisi yako.
· MVURA YASINA MVURA-YEMAHARA: Yedu ultrasonic mota diffuser inogona kubata 60ml yemvura uye ichienderera ichishanda nguva kusvika maawa matanhatu. Ichavharira auto-pakavhara kana paine mvura shoma yasara, iyo inogona kudzivirira mudziyo kubva kukuvara.
USB mota yakakosha mafuta diffuser
chena / nhema
SP-G48 150ml yemakwikwi kukwidziridzwa ultrasonic yakakosha mafuta kunhuhwirira diffuser
SP-G12 Smart Alexa Weather Weather Yakakosha Mafuta Inonhuwira Aromatherapy Ultrasonic Alarm Clock Wifi Aroma Diffuser